शुद्ध पानी फिल्टर को भूमिका
2020 / 07 / 09 1569
शुद्ध पानीको मेशिन भनेको हामी प्राय जसो शुद्ध पानी मिसिन भन्छौं। शुद्ध पानी मेशिनले अल्ट्रा-कम प्रेशर रिभर्स ओस्मोसिस टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ, जसले प्रभावकारी रूपमा क्याल्सियम, म्याग्नीशियम, ब्याक्टेरिया, हटाउन सक्छ ...
नल खरीद गल्ती विधिहरू
2020 / 07 / 09 799
१. इन्डक्शन नलहरू सबैभन्दा बढी पानी-कुशल ईन्डक्शन नल हुन् केवल थोरै पानी मात्र उत्पादन गर्दछन, तर उच्च मूल्यमा बेच्दछन् र यसलाई कायम राख्न महँगो हुन्छन्। परिवार प्रयोग प्रेरण fau ...
नल मर्मत रणनीति
2020 / 07 / 09 1369
नल सफा गर्नु जटिल छैन, यसलाई राख्नुहोस्, र यो लामो समयको लागि रहनेछ। १. तामाको नलका लागि, यदि तपाईंलाई प्लेट गरिएको सतह सफा गर्न आवश्यक छ भने, तपाईं यसलाई सी पानी वा डिटर्जेंटको साथ सफा गर्न सक्नुहुनेछ।
नल खरीद गल्तीहरू
2020 / 07 / 09 1087
१. इन्डक्शन नलहरू सबैभन्दा बढी पानी-कुशल ईन्डक्शन नल हुन् केवल थोरै पानी मात्र उत्पादन गर्दछन, तर उच्च मूल्यमा बेच्दछन् र यसलाई कायम राख्न महँगो हुन्छन्। परिवार प्रयोग प्रेरण फा ...
-० बर्षे पुरानो होटेलले परिचय गर्न धेरै खर्च गरेको छ, के अमेरिकामा स्मार्ट शौचालयहरू फुट्ने गर्दछन्?
2020 / 07 / 09 924
हवाईको प्रख्यात शेरटोन वाइकीकी होटलले अर्को बर्ष आफ्नो th० औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ। होटलले भर्खरै यसको सबै १,50 कोठा शौचालयलाई स्मार्ट शौचालयको साथ बदल्यो। स्मार्ट शौचालय एआर ...